Dowladda Sacuudiga oo Maxjarka caafimaadka xoolaha ka dhisayso Dekedda Berbera ee W/galbeed Somalia – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dowladda Sacuudiga oo Maxjarka caafimaadka xoolaha ka dhisayso Dekedda Berbera ee W/galbeed Somalia
Sida lagu soo daabacay Wargeyska Alyoom ee ka soo baxa dalka Sacuudiga waxay Wasaaradda Beeraha ee Sacuudiga oggolaatay in Maxjar laga dhisao Dekedda Berbera oo lagula soconayo caafimaadka xoolaha nool ee loo dhoofinayo Sacuudiga.
Maxjarkaasi ayaa la sheegay inuu noqon doono mid KMG oo ay hawlihiisa socon doonaan muddo lix bilood oo keliya, laga bilaabo bishan Shacbaan 1-da ee sannadka 1436 Hijriyah.
Wargeyska waxa uu qoray in Maxjarkaasi damaanad qaadi doono faya-qabka Xoolaha nool ee loo soo dhoofinayo Sacuudiga.
Dhinaca kale, Boqorka dalka Sacuudiga, ahna Qaadumka Labada Xararm ee Shariigaynka, Boqor Salmaan Bin Abdiaziz Al-sacuud ayaa ansixiyey Kharaj loogu talagalay in dadka Soomaalida iyo kuwa u dhashay dalka Syria la siiyo bisha barakaysan ee Ramadaan ee bilan doonta bishan June 18-da.
War qoraal ah oo ay baahisay Wakaalladda Wararka Sacuudiga ee SPA, ayaa lagu sheegay in La-taliyaha Wasiirka Arrimaha Gudaha, ahna Madaxa Ololaha Samafalka ee Sacuudiga, Dr. Saciid Al-carabi Alxarthi ayaa faahfaahiyey miisaaniyadda loogu talagalay Kharajka Afurka ee loo qoondeeyey in lagu afuriyo dadka soomaan ee dalalka Somalia iyo Syria.
Waxa uu tilmaamay in loo qoondeeyey lacag dhan Hal billion, kow iyo afartan milyan, saddex boqol iyo siddeed kun iyo konton iyo toddobo Riyaal (1,41.308.057).
Kaalmadaasi Samafalka ayaa loogu talagalay inay ku afuraan dadka Soomaalida iyo kuwa Suuryaanka ee dhibaataysan.
Wxaaa kaloo kharajkaasi loogu talagalay in lagu sameeyo 176 Barnaamijyo Samafal iyo mid Aadminimo, oo ay ku jiraan caafimaad, waxbarasho iyo dhismaha hoy.
Xigasho: Alyaum.com iyo SPA.
Alshabaab oo la sheegay inay shuruud ku xiray sii-daynta Sarkaal ka tirsan Boliska Kenya